डेंगु केहो ? लक्षण तथा यसबाट बच्ने उपायहरु - काभ्रे पोष्ट
डेंगु केहो ? लक्षण तथा यसबाट बच्ने उपायहरु
May 10, 2020 May 12, 2020 काभ्रे पोष्ट1 Comment on डेंगु केहो ? लक्षण तथा यसबाट बच्ने उपायहरु
काठमाडौं -लामखुट्टे को टोकाई बाट सर्ने भाइरस को संक्रमण बाट हुने रोग मध्ये को एउटा रोग डेंगू पनि हो । यो Flavivirus अन्तर्गत पर्ने Dengue virus नाम को जीवाणु ले गर्दा लाग्दछ । एडिज इजीप्टाई जात को लामखुट्टे ले डेंगु भएका लाई टोकेर अरुलाई टोकेमा यो रोग सर्दछ । शुरुमा अफ्रिका मा मात्रै पाइने यो लामखुट्टे सबैजसो गरम भूभाग मा पाइन्छन् र इनले प्रायः दिउँसो वा साँझपख टोक्ने गर्दछन् । यो लामखुट्टे का खुट्टा मा सेता धर्साहरु र ढाड को माथिल्लो भागमा वीणा आकार का धर्साहरु रहेका हुन्छन्, जुन अरु प्रजाति का लामखुट्टे मा देखिँदैन । पानी जम्ने ठाउँ, साना खाल्डाहरु मा सफा पानी धेरै दिन देखि जमेर बसेको भए यस्ता ठाउँहरु मा यो लामखुट्टे ले फुल पार्दछ ।
डेंगू को जटिलता अनुसार एसलाई ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ- १. डेंगू फिभर २. डेंगू हेमोरेजिक फिभर र ३. डेंगू शक सिन्ड्रोम । डेंगू को संक्रमण का बेला विशेष खालको ज्वरो आउँछ जसलाई डाक्टरी भाषामा हेमोरेजिक फिभर भनेर चिनिन्छ। हातगोडा, जोर्नी तथा टाउको दुख्ने र आलस्य हुने यो रोगका प्रमुख लक्षण हुन् । तेसैले एसलाई ब्रेक बोन फिभर पनि भनिन्छ । यो रोग विश्वभरि फैलिएको भए पनि नेपाल र भारत मा एसबाट प्रभावित हुनेको संख्या बढ्दो छ । यो भाइरस को ४ वटा सेरोटाइप्स (DEN-1, 2, 3, 4) छन् जस अन्तर्गत थुप्रै जेनोटाइप्स छन् । आजभन्दा केही शय वर्ष अगाडी यी भाइरसहरु बाँदर बाट मानिस मा सरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
डेंगु भएको कसरी थाहा पाउने ? डेंगु भाइरस बोकेको लामखुट्टे ले टोकेको सात दिन पछि बिमारी का लक्षणहरु देखिन थाल्छन् । एक्कासी उच्च ज्वरो आउनु,लगातार ५ देखि ७ दिनसम्म ज्वरो आउनु,असाध्यै टाउको दुख्नु,आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्नु,ढाड जोर्नी तथा मांसपेशीहरु दुख्नु,शरीरमा बिमिरा आउनु ।
स्थिति अझै गम्भीर हुँदै गयो भने लक्षण पनि अरु दुःखदायी हुन थाल्छ – नाक, मुख गिँजा बाट रगत आउने, आन्तरिक रक्तस्राव हुने ,कालो दिसा तथा कालो वान्ता आउने,रगत मा प्लेटलेट को संख्या घट्न थाल्ने,पेट दुख्ने ,नाडी मधुरो हुने,रक्तचाप घट्दै जाने ,शरीर मा रगत को कमी हुँदै जाने।
उपचार के छ ? अहिलेसम्म डेंगुको औषधी बनेको छैन । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु नै यसको एकमात्र उपचार हो । त्यसैले स्थिति गम्भीर नहुँदै माथिका लक्षणहरु देखिनसाथ अस्पताल जानुपर्छ र चिकित्सकको सम्पर्कमा रहनुपर्छ । डेंगु लागेपछि रगतमा प्लेटलेट्सको संख्या तिब्र रुपमा घट्न थाल्छ । यस्तो अवस्थामा औषधीका साथसाथै खानपान र सही दिनचर्या आवश्यक हुन्छ । सादा भोजन लिनुपर्छ । धेरै नुन भएको खाने कुरा खानुहुँदैन । मसलेदार चटपटे खानेकुरा बन्द गर्नुपर्छ । अनार वा गहुँको जमराको रस पिउनुपर्छ । ताजा मौसमी फलफूल खानुपर्छ । नरिवल पानी वा सफा पानी धेरै मात्रामा पिउनुपर्छ । भिटामिन सी युक्त फल खानुपर्छ । कागती, सुन्तला, अंगुर, जामुन पर्याप्त मात्रामा खानुुपर्छ । मेवाको पातको रस बनाएर दिनमा दुई/तीनपटक पिउँदा त्यसले फाइदा गर्छ ।
डेंगुबाट यसरी बच्नुहोस् – डेंगुबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्नुपर्छ,पानी जम्न सक्ने भाँडाहरु जस्तैः गमला, फुलदानी, खाली बट्टा, अल्कत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरु, गाडीको काम नलाग्ने टायर आदिमा पानी जम्न नदिने उपाय गर्नुपर्छ,पानीका ट्याङ्कीमा लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने गरी ढाकेर राख्नुपर्छ,कूलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक-दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्ने,फुलदानीमा रहेको पानी कम्तीमा हप्तामा दुई पटक फेर्नुपर्छ,एडिस एजिप्टाई जातको लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा पनि प्रायः पूरा बाहुला भएको वा शरीर पुरै ढाकिने लुगा लगाउनु पर्छ,
सम्भव भएसम्म दिउँसो सुत्दा पनि झुल प्रयोग गर्नु पर्छ साथै साना केटा केटीलाई जुनसुकै समयमा पनि झुलभित्र सुताउनु पर्छ,लामखुट्टेको टोकाईबाट बच्न लामखुट्टे भगाउने मल्हम पनि दल्न सकिन्छ ।घरका झ्याल ढोकामा जाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्ने, पानी जम्ने खाल्टाखुल्टी पुर्ने गर्नुपर्छ ।
Tagged #Dengue mosquito #डेंगु
आफ्नो भूमि फिर्ताको माग गर्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव। पोखरामा मोदीको पुत्ला जलाइयो
जानिराखै कपालमा पर्ने चायाबाट मुक्ति पाउने केहि घरेलु उपचार बिधी
थप ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या ५८४ पुग्यो
May 23, 2020 May 23, 2020 काभ्रे पोष्ट
उदयपुर, कपिलबस्तु र पर्सामा भेटिए नयाँ ७ संक्रमित, संक्रमितको संख्या १०९ पुग्यो
May 9, 2020 काभ्रे पोष्ट
थप ३२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि, कुल सख्या ५४८ पुग्यो
1 thought on “डेंगु केहो ? लक्षण तथा यसबाट बच्ने उपायहरु”
Pingback: के घरमा ‘मनीप्लान्ट’ रोप्दा पैसा आर्जन हुन्छ ? - काभ्रे पोष्ट